कारागारमा गोरे र शोभराजको प्रतिस्पर्धा ! – Khabarhouse
कारागारमा गोरे र शोभराजको प्रतिस्पर्धा !
Khabar house | ४ फाल्गुन २०७६, आईतवार ०४:२७ | Comments
काठमाडौं : नाटकीय शैलीमा विभिन्न देश पुगेर ह त्या गर्ने विश्वकुख्यात अ’पराधी चार्ल्स शोभराज र प्रहरीलाई नै हात लिएर विमानस्थल बाटै ३८ क्विन्टल सुन त’स्करी गर्ने अ’भियुक्त चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ । सुन्धारा स्थित केन्द्रीय का’रा गारको गोलघरमा रहेका उनीहरूको जे’लभित्रै दोस्ती झाँगिएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
शोभराज र गोरेको जे’ल दैनिकी चेस र बाघचाल प्रतिस्पर्धामा बित्ने गरेको छ । उनीहरू दैनिक चेस र बाघचाल प्रतिस्पर्धामा रमाउने गरेको केन्द्रीय कारागारका जे’लर लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाले बताए। उनका अनुसार गोलघरमा रहेका सात कै’दी बन्दीमध्ये शोभराज र गोरेको सम्बन्ध विशेष छ । दुवैजना किताब पनि साटफेर गरेर पढ्छन् ।
उनीहरू कु’ख्यात भएकाले जे’ल प्रशासनले विशेष नि’गरानीमा राखेको छ । भाग्न सक्ने र जे’लभित्रैबाट अ’पराध गर्न सक्ने व्यक्तिलाई गोलघरमा राखिन्छ । उनीहरूले गोल घर भित्रै कै’दीबन्दीलाई मात्र केही घन्टा भेट्न पाउँछन् । शोभराज ०६० यता गोलघरमा छन् । एकपटक उनीसँग मोबाइल लगायत वि’द्युतीय सामान भेटाएपछि जे’ल प्रशासनले थप कडाइ गरेको छ ।
गु’न्डा नाइके अभिषेक गिरी, बाल यौ’न दु’राचारमा प’क्राउ परेका साउदी अरेबियन नागरिक र न्यायाधीश रण बहादुर बमको ह”त्यामा सं’लग्न एक कै’दी पनि गोलघरमै छन् । शोभराज जे’ल बसेको नौ वर्ष भयो । सबै मु’द्दामा कै’द भुक्तान गरेर छुट्न अब चार वर्ष बाँकी छ । जे’लर बाँस्कोटाका अनुसार ०८० मा उनको सबै कै’द सजाय सकिनेछ ।